Announcements - Mandalay Catholic Archdiocese
Mingalar bar! Thank you all for being here with us for this important announcement. I welcome all of those joining us online as well.
posted 23 Feb 2016, 01:44 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 23 Feb 2016, 01:45 ]
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်မှာ မန္တလေးသာသနာအတွင်းရှိ တချို့ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများအား နေရာ ပြောင်းရွေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန် တာဝန်ပေးခန့်အပ်ပြီး (၂၀၁၆) ခု မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ မြို့ရွာများတွင် သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု သိရပါသည်။
မြင်းခြံ လုဒ်မယ်တော်သခင်မ ဂူလှိုင်ပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
posted 22 Jan 2016, 01:46 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 22 Jan 2016, 01:46 ]
ခရစ္စမတ်ကယ်ရယ် သီချင်းဆိုထွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရန်စည်းကမ်း ကြေညာချက်။
posted 29 Nov 2014, 03:05 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE
ကျေးဇူးတင်မစ္ဆား ပူဇော်ခြင်း ဖိတ်ကြားလွှာ
posted 14 Jun 2014, 19:07 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 14 Jun 2014, 19:10 ]
ANNOUNCEMENT OF ASSIGNMENTS (2-5-2014)
posted 19 May 2014, 06:42 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE
ANNOUNCEMENT OF ASSIGNMENTS
1 Rev. Fr Paul Htun Myint St. John (MDY) ShweBo (PP)
2 Rev. Fr. Paul Thet Khaing ShweBo Ye U (PP)
3 Rev. Fr. William Win Kyaw Ye U Chaung Yoe (PP)
4 Rev. Fr. Augustine Tin Htun Chaung Yoe Youth Director
Assistant Parish Priest of Chanthargone
5 Rev. Fr. Patrick Soe Htun Youth Director Secretary of Archbishop and Notary
6 Rev. Fr. Cyprian Aung Win Immaculate Church (POL) Rector of St. Thomas Seminary
7 Rev. Fr. Dominic Jyo Du Rector of St. Thomas Nyaungbintha (TDG) (PP)
8 Rev. Fr. Thomas Htun Win Htun Nyaungbintha Tantze (PP)
9 Rev. Fr. Peter Myo Aung Tantze Chanthaywa (PP)
10 Rev. Fr. Solomon Htun Min Zaw Chanthaywa Rector of St. Aloysius Minor (POL)
11 Rev. Fr. Cyril Myint Soe Rector of St. Aloysius Director of Caritas (MDY) and PP of St. Michael church (MDY)
12 Rev. Fr. John Bosco Soe Lin Kantbalu Spritual Director of St. Aloysius Minor and Assistant Parish Priest of Sacred Heart Church (POL)
13 Rev. Fr. John Eudes Aung Kyaw Khaing Kantbalu (PP)
14 Rev. Fr. John Kyaw Thura Te Gyi (PP)
15 Rev. Fr. Joseph Thet Lwin Chauk St. John (MDY) (PP)
16 Rev. Fr. Hubert Win Nyo Thayetkhone Chauk (PP)
17 Rev. Fr. Peter Htun Theik (LWMT) Thayekhone (PP)
18 Rev. Fr. Ireaneus Mang Sian Mung (LWMT) Thepyu (PP)
19 Rev. Fr. Aloysius Nay Myo Swe ShweBo (Assistant PP)
20 Rev. Fr. David Toe Wai Aung Chaung Oo (Assistant PP)
21 Rev. Fr. Dominic Thi Ha Cathedral (Assistant PP)
22 Rev. Fr. Dominic Myo Zaw Win St. Aloysius Minor
23 Rev. Fr. Henry Lazing Brang Mai St. Joseph (Lafon) (Assistant PP)
24 Rev. Fr. John Paul Nay Win Maung St. Thomas Seminary
25 Rev. Fr. John Htun Htun Naing Nyaungbintha (Assistant PP)
26 Rev. Fr. Patrick Nanda yan Nyein Aung St. Xavier Church (MDY) (Assistant PP)
27 Rev. Fr. Lawrence Zaw Min Latt St. Michael Church (MDY) (Assistant PP)
28 Rev. Fr. Marco Tin Win Rector of Cathedral and Vicar General
29 Rev. Fr. Peter Hla Shwe Vicar Forane and Monywa PP
30 Rev. Fr. Paul Htun Myint Vicar Forane and ShweBo PP
31 Rev. Fr. John Mg San Vicar Forane and Meikhtila PP
32 Rev. Fr. George San Min Sein Pan (MDY) PP
33 Rev. Fr. John Soe Tint Chancellor and Lafon PP
34 Rev. Fr. Philip Ba Shwe Cathedral St Peter and St. Paul Church, Amarapura (PP)
35 Rev. Fr. Peter Sein Shwe Mary Help of Christian, Sagaing PP
36 Rev. Fr. Edmond Nay Kyaw Lwin Yemethin Immaculate Church (POL) PP
1 Rev. Fr. Philip Naw Aung Local Superior
2 Rev. Fr. David Kyaw Kyaw Lwin Parish Priest of Chanthargone
3 Rev. Fr. Patrick Kyaw Lin Parish Priest of Sinpyu
4 Rev. Fr. David Kyaw Swa Latt Parish Priest of Myit Nge-Myauk Kaing
5 Rev. Fr. William Phyo Wai Parish Priest of Zaw Gyi
The other remain as before.
ဘုန်းတော်ကြီးများ တာဝန် ပြောင်းရွေ့ခြင်း ကြောငြာချက်
( ၂ - ၅ - ၂၀၁၄ )
အမည် ယခင်တာဝန် မှ ယခု တာဝန် သို့
၁ Rev. Fr Paul ထွန်းမြင့် စိန်ဂျွန်း (မန္တလေး) ရွှေဘို (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၂ Rev. Fr. Paul သက်ခိုင် ရွှေဘို ရေဦး (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၃ Rev. Fr. William ၀င်းကျော် ရေဦး ချောင်းရိုး (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၄ Rev. Fr. Augustine တင်ထွန်း ချောင်းရိုး လူငယ်တာဝန်ခံ
၅ Rev. Fr. Patrick စိုးထွန်း လူငယ်တာဝန်ခံ ဆရာတော်အတွင်းရေးမှုး နှင့် Notary
၆ Rev. Fr. Cyprian အောင်ဝင်း မေမြို့ Immaculate Church စိန်သောမက်ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း Rector
၇ Rev. Fr. Dominic ဂြိုလ်တု စိန်သောမက်ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း
Rector ညောင်ပင်သာ (TDG) (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၈ Rev. Fr. Thomas ထွန်းဝင်းထွန်း ညောင်ပင်သာ တံဆည် (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၉ Rev. Fr. Peter မျိုးအောင် တံဆည် ချမ်းသာရွာ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၀ Rev. Fr. Solomon ထွန်းမင်းဇော် ချမ်းသာရွာ မေမြို့ စိန်အလောရှက်(စ်) Rector
၁၁ Rev. Fr. Cyril မြင့်စိုး မေမြို့ စိန်အလောရှက်(စ်) Rector Director of Caritas (မန္တလေး) နှင့် စိန်မိုက်ကယ် - သံဝင်း (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၂ Rev. Fr. John Bosco စိုးလွင် ကန့်ဘလူ စိန်အလောရှက်(စ်) ၀ိညာဉ်လမ်းညွှန် နှင့် မေမြို့ ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားကျောင်း (လက်ထောက်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၃ Rev. Fr. John Eudes အောင်ကျော်ခိုင် ကန့်ဘလူ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၄ Rev. Fr. John ကျော်သူရ တဲကြီး (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၅ Rev. Fr. Joseph သက်လွင် ချောက် စိန်ဂျွန်း မန္တလေး (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၆ Rev. Fr. Hubert ၀င်းညို သရက်ခုံ ချောက် (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၇ Rev. Fr. Peter ထွန်းသိုက် (LWMT) သရက်ခုံ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၈ Rev. Fr. Ireaneus Mang Sian Mung (LWMT) သဲဖြူ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁၉ Rev. Fr. Aloysius နေမျိုးဆွေ ရွှေဘို (လက်ထောက်ဘုန်းတော်ကြီး)
၂၀ Rev. Fr. David တိုးဝေအောင် ချောင်းဦး (လက်ထောက်ဘုန်းတော်ကြီး)
၂၁ Rev. Fr. Dominic သီဟ ကယ်သီဒယ် (လက်ထောက်ဘုန်းတော်ကြီး)
၂၂ Rev. Fr. Dominic မျိုးဇော်ဝင်း စိန်အလောရှက်(စ်) Minor
၂၃ Rev. Fr. Henry Lazing Brang Mai St. Joseph (လဖုန်း) (လက်ထောက်ဘုန်းတော်ကြီး)
၂၄ Rev. Fr. John Paul နေ၀င်းမောင် စိန်သောမက်ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း
၂၅ Rev. Fr. John ထွန်းထွန်းနိုင် ညောင်ပင်သာ (လက်ထောက်ဘုန်းတော်ကြီး)
၂၆ Rev. Fr. Patrick နန္ဒရန်ငြိမ်းအောင် စိန်ဇေးဗီးယား မန္တလေး (လက်ထောက်ဘုန်းတော်ကြီး)
၂၇ Rev. Fr. Lawrence ဇော်မင်းလတ် စိန်မိုက်ကယ် သံဝင်း (လက်ထောက်ဘုန်းတော်ကြီး)
၂၈ Rev. Fr. Marco တင်ဝင်း ကယ်သီဒြယ် Rector and Vicar General
၂၉ Rev. Fr. Peter လှရွှေ မုံရွာ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး) နှင့် Vicar Forane
၃၀ Rev. Fr. Paul ထွန်းမြင့် ရွှေဘို (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး) နှင့် Vicar Forane
၃၁ Rev. Fr. John မောင်စန်း မိတ္ထီလာ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး) နှင့် Vicar Forane
၃၂ Rev. Fr. George စံမင်း စိန်ပန်း မန္တလေး (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၃၃ Rev. Fr. John စိုးတင့် Chancellor and စိန်ဂျိုးဇက် လဖုန်း (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၃၄ Rev. Fr. Philip ဘရွှေ Cathedral St Peter and St. Paul Church, အမရပူရ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၃၅ Rev. Fr. Peter စိန်ရွှေ Mary Help of Christian, စစ်ကိုင်း (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၃၆ Rev. Fr. Edmond နေကျော်လွင် ရမည်းသင်း ပြင်ဦးလွင် Immaculate Church (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၁ Rev. Fr. Philip နော်အောင် Local Superior
၂ Rev. Fr. David ကျော်ကျော်လွင် ချမ်းသာကုန်း (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၃ Rev. Fr. Patrick ကျော်လွင် ဆင်ဖြူ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၄ Rev. Fr. David ကျော်စွာလတ် မြစ်ငယ်-မြောက်ကိုင်း (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
၅ Rev. Fr. William ဖြိုးဝေ ဇော်ဂျီ (ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)
စိန်အာလောရှက်(စ်) နှစ် (၁၀၀) ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
posted 17 Mar 2014, 00:26 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 17 Mar 2014, 00:28 ]
စိန်အာလောရှက်(စ်) အခြေခံရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း နှစ် (၁၀၀) ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော်ကြီး (၁၉၁၄ - ၂၀၁၄) ဖိတ်ကြားလွှာ
မြင်းခြံမြို့ လုဒ်မယ်တော်ပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
posted 27 Feb 2014, 05:06 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 27 Feb 2014, 05:06 ]
မြင်းခြံမြို့ လုဒ်မယ်တော်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
မြင်းခြံမြို့ လုဒ်မယ်တော်သခင်မ ဂူလှိုဏ်ပွဲတော်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ မှ မတ်လ ၁ ရက်နေ့များတွင် အောက်ပါအစီအစဉ်များ အတိုင်းကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရပ်နီး ရပ်ဝေးမှ ဘာသာတူ ညီအကိုမောင်နှမများ အားဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
စိန်အလွိုက်ရှက် အခြေခံရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း နှစ်၁၀၀ ပြည့် ဂျူဗလီ ပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
posted 23 Jan 2014, 05:06 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 23 Jan 2014, 05:15 ]
စိန်အလွိုက်ရှက် အခြေခံရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း နှစ်တစ်ရာပြည့် ဂျူဗလီ ပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
ပြင်ဦးလွင်မြိ့ စိန်အလွိုက်ရှက် အခြေခံရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း၏ နှစ်တစ်ရာပြည့် ဂျူဗလီ ပွဲတော်ကြီးကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ဧပြီလ ၃၀ ရက်မှ မေလ ၂ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ပွဲတော်သို့ တက်ရောက်ပါဝင်ကြပါရန် ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဘာသာတူများကို ကြိုတင်အကြောင်းကြား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ် အစီ အစဉ်များကိုလည်း ထပ်မံကြော်ငြာပေးသွားပါမည်။
နေ့ရက် ဧပြီ ၃၀၊ မေ ၁၊ ၂ ရက် ၂၀၁၄။
နေရာ စိန်အလွိုက်ရှက် အခြေခံ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့
(၉-၁-၂၀၁၂) ရက်စွဲပါ ဦးကျော်စိုး (ပါ-၈) ဦး၏ ပြန်လည်ရှင်းလ်းကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အများသိစေရန် ထပ်မံ ရှင်းလင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
posted 18 Jan 2014, 23:11 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 18 Jan 2014, 23:13 ]